Uma uqala uqale kungase kubonakale sengathi konke ulula futhi kulula: amagagasi Zombies ziyeza esibhekiswe endlini, umsebenzi wethu oyinhloko - hhayi uzivumele yaya embundwini. Njengoba izithiyo udinga ukwakha ezihlukahlukene izitshalo ezinezici ngabanye. Ngokwesibonelo, abanye bangase baphonse in ingcuba uphizi, abanye - ukubambezela ukunyakaza kwabo, abanye edwengula izitha zibe yizicucu.
Ngezikhathi bhakabhaka umdlali izotholakala esincane amandla elanga, okuyinto, empeleni, udinga ukuthenga abavikeli oluhlaza. Le mali kungenziwa kukhuphuke ngo kulinywe at ubhekilanga yayo ipulazi. Ngaphezu kwalokho, ukudlula "Izitshalo vs. Zombies" ngeke kube inselele yangempela.
Kunanzuzoni le phrojekthi, kungcono yokuthi kukhona eyinkimbinkimbi ezithile ohlelweni, okuyinto nge umsebenzi omusha ngamunye buthola umfutho, hhayi okuvumela umdlali uphumule okwesikhathi sesibili. Umdlalo kufana inselele: "Futhi noma ebuthaka ukuba simelane inqwaba Zombies?".
Ukwenza Izinto Zibe Lula nemikhawulo eyinkimbinkimbi ngesikhathi esisodwa ukufeza ukuthunywa - okungukuthi evelele "Izitshalo vs. Zombies". Ukudlula umdlalo ngamunye ukubulawa okwalandela komsebenzi kuzobandakanya izitha nzima futhi ngonya. Lokhu kuqala zonke Zombies ngeke trudge like ufudu hhayi usongo olukhulu. Kodwa ngemva ohambweni ambalwa kungabonakala ghoul wakhe engadini, sivinini nge ibhakede ekhanda lakhe, simenze umfutho abalulekile izikhali. Kodwa ungesabi - abameli oluhlaza ukuyeka ibuphi ububi sifuna ukuba embule abanikazi Nogebhezi lwawo endlini.
Ummbila, beet, uphizi, zucchini, ibhece - ibanga izithelo nemifino ilungele ukufundisa isifundo Zombies muncu. Inkinga iwukuthi ngokuhamba kwesikhathi kwezinhlobo ukuhlukahluka izitshalo kanye Zombies kwandisa ezingeni ngalinye, futhi udinga ukuba banake kahle ukuthi izitha elinde wena kulesigaba yomdlalo.
Ukudlula "Izitshalo vs. Zombies" ivumela umsebenzisi ukukhetha lokho afuna nezitshalo ngeke itshalwe engadini yakho, kodwa inikezwe inombolo Slots lilinganiselwe, inani okungase lenyuka nge sikhathi. Uhlanga ngalunye lommbila e ngezinga elithile ngempumelelo ngokumelene izinhlobo ezithile ingcuba. Kubalulekile ukubamba lolu lwazi ukuze bakwazi ukushaya engadini ephumelela kunazo ngaphambi ukulwa.
Zonke isenzo yomdlalo ihlukaniswe 5 izahluko ezinkulu, ngamunye okuyinto libhekene nesikhathi sosuku noma indawo entsha. Ngo isiqephu ngasinye, ungathola izinhlobo ezintsha zezitshalo futhi ngcono zabo. Ekupheleni umdlalo kuzotholakala nge omkhulu skhatka zombossom. Futhi, ukudlula "Izitshalo vs. Zombies" ngeke okryvat umsebenzisi omusha game izindlela.
Ungazama ukuphumelela kuzo zonke izivivinyo, walungisa ikakhulukazi abadlali abanolwazi: ukuphakama kwamanani nabaphikisi, ukuntuleka amandla elanga, encane nezitshalo ukwehluka, ngamafuphi, bonke siyisinqumo esinzima kunazo zonke kuphela anganikeza ukudlula "Izitshalo vs. Zombies".
Ukusinda - olunye uhlobo game mode, lapho umdlali kumele ubambe out eside ngangokunokwenzeka silwa namagagasi engapheli Zombies. Best of the best zizofakwa ethebuleni amarekhodi. Kafushane, umdlalo has zonke izakhi ezidingekayo ukwenza ukudlula "Izitshalo vs. Zombies" ezithakazelisayo.
Skyrim, "Ukuhamba Nightmare" - imisebenzi ukuhamba ephelele
Umdlalo we-computer "Ubuthi 4": imiyalo console, amakhodi
Ungagijimi FIFA 14. FIFA 14 akasabeli ukwethulwa
"Starline A93 CAS + LINE": ukubuyekezwa. "A93 Starline": Izibuyekezo wabanikazi alamu imoto, bhukwana
I wokushintsha kwamandla nokwakheka kwezinto nokushisa yokudlulisa. Izindlela ukudluliswa ukushisa futhi ukubala. ukudluliselwa Heat - kungcono ...
I-NASA ihlela ukwenza isitatimende "esimangalisa" mayelana nesathelayithi seJupiter - Europe
Alexander Kozlov: Biography futhi umsebenzi kwezemidlalo football